आधुनिक र स्टाइलिश भित्री सजावट यसको बोट र फूल मा प्रयोग, जीवित र मानिसले बनाएको दुवै समावेश, र तिनीहरूले सबैभन्दा असम्भाव्य सामाग्री तपाईं बनावट र रंग मा मनपर्ने सिर्जना गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा लोकप्रिय आज एक समयमा प्रयोग गर्न फैशन भएको छ, तर लगभग अद्वितीय, विचित्र रूखहरू बनाउन कला भूल।
सिर्जना Topiary आफ्नै हात यो चयन संरचना सामाग्री को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक ट्रंक र एक गोलाकार माथिल्लो भाग लिइरहनुभएको एक रूख रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। topiary सिर्जना लागि सामाग्री एक जीवित पात वा फूल, रिबन, गोले, पेबल्स, अनाज रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, आजको भित्री डिजाइन, floristry प्रासंगिक आफ्नै हातले र आफ्नो स्वाद प्राकृतिक र कृत्रिम फूल र बोट को एक अद्वितीय संरचना सिर्जना गर्न। यी मानिसले बनाएको भित्री सजावट लागि विशेष हेरविचार आँखा खुसी लामो समय को लागि हुन सक्छ आवश्यक छैन, तिनीहरूले।
तपाईं आफ्नो घर Topiary को भित्री सजाउनु निर्णय भने, स्टोर मा किन्न हतार छैन। कला वा आभूषण को कुनै पनि काम को मूल्य यसको विशिष्टताको छ। तर आफ्नै सिर्जना गर्न प्रयास गर्न सबै भन्दा राम्रो को एक साँच्चै अद्वितीय उदाहरण प्राप्त गर्न। यदि कुनै सान्दर्भिक अनुभव छ - तपाईं धेरै मास्टर कक्षाहरू, आफ्नो हातमा एक topiary कसरी बनाउन विस्तृत बताउँछन् जो को सिफारिसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, यी कक्षाहरू, सञ्चालनका एक phased कार्यान्वयन क्रम समावेश र स्पष्टताको लागि, फोटो फिचर।
सुरु गर्नु पहिले, तपाईंले topiary लागि उपयुक्त रंग चयन गर्नुपर्छ। यो भित्री प्रयोग टन संग राम्रो मिसिनु पर्छ। उदाहरणका लागि, खैरो रंग मा समाधान पूर्ण रूख को भित्री, नीलो र नीलो रंग संयोजन पूरक। नरम, को भित्री को lackluster टोन Topiary expressive उज्ज्वल रंग पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।
हामी पहिले नै त्यो Topiary उल्लेख गरेको छ आफ्नो हातले, तपाईं सामाग्री सबै प्रकारका सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। का एक कफी रूख कसरी बनाउने, उदाहरणका लागि, विचार गरौं। मुद्दा एक क्षेत्र सिर्जना साथ सुरू हुँदै। यो गर्न, यो देखावटी बेलुन बुनाई मुद्दा, यार्न घाउ smazhem सिलिकेट गोंद र्याप यो धेरै घण्टा ड्राई गरौं। त्यसपछि बल बाट हावा रगत गर्न निम्नानुसार।
रूख ट्रंक विचित्र शाखा प्रयोग गर्न सकिन्छ लागि, यसले हामीलाई चिपके फ्रेम तयार कस्नु गर्न।
एक खोल्ने जो मार्फत बेलुन भरण सिलिकन टास्ने देखावटी। बन्दूक कफी सिमी (को गोंद तातो हुनुपर्छ) संलग्न लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्पादन चिटिक्क देखिन्छ भनेर, कफी सिमी मा टास्ने लागू गर्नुपर्छ। शीर्ष ट्याग तिनीहरूलाई, बलियोसँग सँगै फिट।
पट संरचना तयार। यो इच्छामा पनि सजाउनु गर्न मूल तरिका हुन सक्छ। यसलाई मा रूख एंकरिंग को पेबल्स वा रोडा, पोख्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, आफ्नै हातले एक topiary पनि गाह्रो छैन सिर्जना गर्न। यो काम रचनात्मकता, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिन्छ र अद्वितीय परिणाम तपाईं सुखद क्षण धेरै ल्याउनेछ।
आफ्नै topiary गरे पनि एक रोचक उपहार रूपमा मित्रहरुलाई उपस्थित हुन सक्छ।
ढाँचा "हीरे" spokes: योजना र वर्णन
चुल्ठो - यो के हो?
छोराछोरीको रचनात्मकता: बल्क आवेदन "सान्टा क्लाउस"
अभिनेत्री Lugovaya Mariya: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
इन्टेल कोर i5 4460 सीपीयू: सुविधा र समीक्षा
Solarus इम्पेरियल Hammamet - किफायती मूल्यहरु मा आरामदायी बसाइ
पोस्ट-कट्टर बैंड: विधा ज्ञात प्रदर्शन गर्ने को सृष्टिको इतिहास
जीवन चक्र चरण र विकास भ्यागुतो
Feodosiya होटल समीक्षा
Dietitian Kovalkov: "के वजन कम गर्न के खाने?" आहार Kovalkova मा समावेश उत्पादनहरु को सूची
खोपडी को हाइपरकोक्टोसिस: कारणहरु, उपचार